नेकपामा विप्लवलाई हेर्ने दृष्टिकोण नेतापिच्छे फरक, को को खटिए वार्तामा ? - नेपालबहस
नेकपामा विप्लवलाई हेर्ने दृष्टिकोण नेतापिच्छे फरक, को को खटिए वार्तामा ?
काठमाडौं । गत फागुन अन्तिम साता केपी ओली सरकारको मन्त्रिपरिषदले लिएको विवादास्पद निर्णय थियो – नेत्रबिक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माथि प्रतिबन्ध । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीको तर्क विप्लव नेतृत्वको नेकपा समूहले अराजनीतिक गतिविधि गरिरहेको छ । साथै , जवर्जस्ती चन्दा असूली पनि ।
उता, नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि ओलीको बोलीमा लोली मिलाउँदै थिए । विप्लवजीहरुले मेरो हत्या गर्ने योजना बनाउनु भएको छ अरे । मलाई मारेर क्रान्ति सफल हुँदैन – प्रचण्डको रोदनयुक्त तर्क थियो ।
विप्लवले त तीन सूत्रीय माग राखेर वार्ताको लागि तयार रहेको जनाई सकेका छन् । पहिलो शर्त हो – पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा । दोस्रो शर्तका रुपमा विप्लवले जेलमा रहेका आफ्ना नेताकार्यकर्ता तत्काल रिहा गर्नुपर्ने राखेका छन् । यस्तै तेस्रो चाहिं वार्ताका लागि सरकारले औपचारिक पत्र पठाउनुपर्ने भनिएको छ ।
हिजोसम्म एकै थातथलो भएका अर्का नेता जो अहिले ओलीसँग निकट छन् रामबहादुर थापा बादल पनि दुबै अध्यक्षसँग सहमत भए । आफ्ना चेला नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नै गृह मन्त्रालयको टाउको दुखाई भएपछि त बादललाई खप्नु भएन सायद । त्यसैले उनैको पहलमा मन्त्रिपरिषदले विप्लवलाई आतंककारी घोषणा ग¥यो ।
गएको पाँच महिनाको अवधिमा सरकार र विप्लव पक्षबीच केही मुठभेड भयो । यसक्रममा विप्लव समूहका केही नेता कार्यकर्ताको ज्यान लिने काम भयो । हिजोका दिनमा यस्तै क्रान्तिबाट सत्तामा आएका प्रचण्ड र बादल नै अहिले आतंककारीको टाउकाको मूल्य तोक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सायद परिवर्तनको बेग भनेकै यही हो ।
बादल नेतृत्वको प्रहरी प्रशासनले गएको महिना सर्लाहीमा झुठो मुठभेडको नाममा कुमार पौडेलको हत्या गरिदियो । यसैगरी गएको साता भोजपुरमा पनि एकजना जिल्ला स्तरकै नेताको हत्या गरियो । उक्त घटनामा नेपाल प्रहरीका एकजना सुरक्षाकर्मीको समेत ज्यान गयो ।
पछिल्लो घटनाले दुबै पक्षलाई झस्काएको अनुभूति भएको छ । विप्लव मात्र होइन , सरकार पनि वार्तामार्फत सहमतिको पक्षमा देखिएको छ ।विप्लवले त तीन सूत्रीय माग राखेर वार्ताको लागि तयार रहेको जनाई सकेका छन् । पहिलो शर्त हो – पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा । दोस्रो शर्तका रुपमा विप्लवले जेलमा रहेका आफ्ना नेताकार्यकर्ता तत्काल रिहा गर्नुपर्ने राखेका छन् । यस्तै तेस्रो चाहिं वार्ताका लागि सरकारले औपचारिक पत्र पठाउनुपर्ने भनिएको छ ।
विप्लवका यी तीन शर्तबारे पार्टीमा वा सरकारमा कुनै छलफल भएको छैन । बरु नेताहरु आफू अनुकुल वातावरण तयार गरी जस हत्याउने होडबाजीमा भने लागेका छन् । जसले गर्दा पार्टी र सरकारबीच नै चरम अविश्वासको स्थिति छ । विप्लवसँग वार्ता गर्नका लागि ओली ,प्रचण्ड र बादलका आ–आफ्नै संयन्त्र सक्रिय भएका छन् ।
ओली प्रचण्डलाई विश्वास गर्ने अवस्थामा छैनन् भने प्रचण्डको बुझाई पनि उस्तै । बादलसमेत दुबै अध्यक्षप्रति भर पर्न सकेका छैनन् । त्यसैले उनको छुट्टै संयन्त्र सल्बलाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना विश्वास पात्रसमेत रहेका महासचिव विष्णु पौडेललाई विप्लव समूहसँग वार्ताको वातावरण बनाउन अह्राएका छन् । पौडेलले विप्लव समूहका प्रभावशाली नेता मानिने हेमन्तप्रकाश ओली सुदर्शनसँग हिजै मात्र नख्खु जेलमा छलफल गरेका छन् । पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि पक्राउ परेका सुदर्शन हाल केन्द्रीय कारागार नख्खुमा बन्दी जीवन बिताईरहेका छन् । पौडेल र सुदर्शनबीच भएको छलफल सतही मात्र हो । सुदर्शनले पार्टीको घोषित नीति र शर्त पूरा भए मात्र वार्तामा बस्न सकिने अडान दोह¥याएका थिए ।
यसरी हेर्दा नेकपा भित्र हरेक विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोण नेतै पिच्छे फरक रहेको स्पष्ट हुन्छ । कसैले कसैलाई विश्वास गर्ने अवस्था छैन । विभिन्न शक्ति केन्द्रको चाहना र बाध्यताका कारण जवर्जस्ती जोडिएको नेकपा भित्र अहिले पनि ठूलो खाडल छ । चाहे त्यो वैचारिक सन्दर्भ होस् वा शासकीय स्वरुपका विषयमा नै किन नहोस् ।
उता, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड यो मुद्धामा सबै क्रेडिट आफैं लिने पक्षमा छन् । विप्लवसँगको वार्ता सफल भए त्यसको जस लिने उनको दाउ छ । त्यसैले पार्टीगत रुपमा भन्दा व्यक्तिगत रुपमा उनी वातावरण तयार गर्न जुटेका हुन् । यसका लागि उनले पूर्व कमाण्डर एवं नेकपा नेता जनार्दन शर्मालाई जिम्मेवारी सुम्पेका छन् । जनार्दनले विप्लव निकट केही पत्रकार तथा नेताहरुसँग छलफल गरेका छन् । साथै प्रचण्डले समेत केही नेतासँग कुरा गरेका छन् ।
दुबै नेताबाट कुनैपनि बेला धोका हुनसक्ने लख काटेका अर्का नेता बादल पनि चनाखो छन् । सर्लाही काण्डमा कुमार पौडेललाई नक्कली मुठभेडमा हत्या गरिएको कुरा उनलाई पछि मात्र थाहा भयो । भनिन्छ ,प्रहरीले सोझै प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिएर पौडेलको हत्या गरेको थियो । यो घटनाले बादललाई सशंकित र आक्रोशित बनाएको छ । तर ओली र प्रचण्ड विरुद्ध अहिले केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले बादल चाउरिएका छन् । साथै , आफ्ना खास चेला विप्लवसँगको छलफल सफल र उपलव्धिपूर्ण भयो भने त्यसको जस आफैं लिने उनको मनसाय प्रष्ट छ । विप्लवको सहानुभूति आर्जन गर्ने बादलको भित्री चाहना रहेको छ । त्यसैले उनी ओली र प्रचण्ड जस्तै आफ्नो दूतमार्फत वार्ताको वातावरण तयार गरिरहेका छन् । उनको दूतका रुपमा सूर्यप्रकाश सुवेदी खटिएका छन् ।
बादल पनि आफ्नो भूमिका बलियो बनाउन तल्लिन छन् । विप्लवसँगको वार्ता सकारात्मक बन्यो भने पार्टी एकीकरणसम्मको अवस्था आउन सक्ने बुझाई उनको रहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा विप्लवको साथ र सहयोग पाए ओली र प्रचण्डकै हैसियतमा पुग्न सकिने ठम्याई उनको रहेको देखिन्छ ।
विप्लव समूहसँग वार्ता गर्ने विषयमा समेत यस्तो खिचातानी हुने पार्टीले देश र जनताको भलो गर्छ भन्ने सोच्नु नै गलत हो । प्रधानमन्त्री ओली काम कम हल्ला बढी गर्न उद्यत् छन् भने प्रचण्डको अभिष्ट बेग्लै छ । उनी कि त साढे दुई वर्ष सग्लो नेकपाको प्रधानमन्त्री हुने नसके आउने महाधिवेशनबाट सहमतिमा पार्टी अध्यक्ष हुने दाउमा केन्द्रित छन् ।
यस्तै ओली पनि पाँच वर्षे कार्यकाल पूरै आफैं चलाउने पक्षमा दृढ छन् । त्यसैले उनी प्रचण्डलाई विश्वास गर्ने पक्षमा छैनन् । प्रचण्डलाई आफ्नै हैसियतमा संकुचित गराउने उनको इच्छा छ । यसका लागि उनले पूर्व एमाले नेताहरुको साथ र सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । तर त्यसमा भने ओली चुकिरहेका छन् ।
यसरी आफैंबीच अविश्वास र मतभेद रहेको पार्टी र नेताको सबै विषय र मुद्धामा निजी विचार एवं दृष्टिकोण रहने गरेको देखिन्छ । यस्तो दल र सरकारको भविष्य पनि अन्धकारमै डुबेको छ ।
अघिल्लो लेखसंसद स्थगनले सत्तारुढ सांसद असन्तुष्ट,सरकारले बदमासी गर्यो‍ः कांग्रेस सभापति देउवा
अर्को लेखबाढी र पहिरोमा परी ३२ अझै बेपत्ता,६७ जनाको मृत्यु ४३ घाइते
नेकपा स्थायी कमिटीका लागि पाँच अजेण्डा तय, होला त वामदेवको प्रवेश
वरिष्ठ नेता नेपाल र भारतीय राजदूत पुरीबीच भेटवार्ता
सभामुखमा फेरि नेम्बाङ नै !